China Nka na ụzụ oke nke Hydraulic pịa breeki na E21 125T / 2500 mm rụpụta na ụlọ ọrụ | BiGa
Nka na ụzụ nke Hydraulic pịa breeki na E21 125T / 2500 mm
Igwe ahụ dum dị na ngwongwo a na-agbanye ọkụ, mpempe akwụkwọ a na-agbanye ọkụ, na nrụgide dị n'ime ya kpochapụrụ site na teknụzụ ịka nká, ike dị elu na ịdị mma nke igwe. A na-etinye silinda mmanụ na-eji okpukpu abụọ maka nnyefe nke elu, nke a na-enye ya na nkwụsị ihe mgbochi na ogwe osisi torsion, nke a na-ahụkarị nke kwụsiri ike na nke a pụrụ ịdabere na ya, yana oke nkenke.
• Igwe ahụ dum dị na ngwongwo a na-agbanye ọkụ, mpempe akwụkwọ a na-agbanye ọkụ, na nrụgide dị n'ime ya kpochapụrụ site na teknụzụ ịka nká, ike dị elu na ịdị mma nke igwe.
• A na-etinye silinda mmanụ na-eji okpukpu abụọ maka nnyefe nke elu, nke a na-enye ya na nkwụsị ihe mgbochi na ogwe osisi torsion, nke a na-ahụkarị nke kwụsiri ike na nke a pụrụ ịdabere na ya, yana oke nkenke.
• Ọdụdọ akara na ntuziaka ezi-na-akụzi mode na-adiaha maka anya nke n'azụ stopa na ọrịa strok nke amị amị ngọngọ, na ruo eruo na dijitalụ ngosi ngwaọrụ, mfe na ngwa ngwa na-eji.
• Slider stroke na-agbanwe ngwaọrụ yana ngwa nlele azụ: ịgbanye ọkụ elektrọnik, akwụkwọ ngbanwe ntanetị, ngosipụta dijitalụ, ọ dị mfe ma dịkwa ngwa n'iji ya.
• The igwe nwere inch, otu, na-aga n'ihu mode nkọwa, commutation, biri oge nwere ike na-achịkwa oge ọsọ agba anọ.
• Safety railing, ụzọ-emeghe ike -off ngwaọrụ.
• Mechanical synchrony torsion mmanya, na-ekpe-right itule ije.
• Mechanical nkpirikpi elekere elekere anya ụgwọ usoro.
• Japan NOK mbụ webatara nna ukwu cylinder akàrà.
Kpụrụ Nchedo (2006/42 / EC):
4.Front mkpịsị aka Protection (Safety ìhè ákwà mgbochi)
5.South Korea Kacon Switkwụ Gbanye (Ọkwa 4 nke nchekwa)
6.Back metal mma nsu na OA ọkọlọtọ
Usoro hydraulic si Bosch -Rexroth, Germany.
Mgbe mmanụ ahụ na-apụta site na mgbapụta ahụ, ụzọ niile na cylinder nrụgide ahụ na-ebu ụzọ pịa mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ, oge ntụgharị oge ọzọ na-ejigide oge igbu oge ịbanye n'ime ụlọ mgbago aka ekpe maka ihe dị ka sekọnd 2. A na-amanye mmanụ dị na cylinder nke ala ahụ na-eme ka ọ banye n'ime ụlọ ahụ dị elu nke dị elu na ụlọ elu ahụ dị n'okpuru ya. Mmanụ laghachi na tank. A na-agbanweghachi ọrịa strok site na valvụ solenoid
Estun E21 njikwa
• Ọnụ ọgụgụ, otu mmemme mmemme
• Monochrome LCD Igbe Igbe.
• Ihe na-eme ka ihe jikota ihe niile
• Akpaka n'ọnọdu akara
• Spindle udeme dechapụ
• Esịtidem oge agba anọ
• Ahịa ahia
• Ngosiputa onodu ogugu, mkpebi na 0.05mm
Dị 125T / 2500 mm
Bend ogologo ogologo nke efere ahụ mm
Ogologo osisi mm
Ihe nchapu ọrịa strok mm
Max oghere dị elu mm
Akpịrị omimi mm
Isiokwu Obosara mm
Ọrụ Elu mm
X Axis Ọsọ mm / s
Na-arụ ọrụ Speed mm / s
Laghachi ọsọ mm / s
Moto kw kw
Ịgba mgba ọkụ
SKF, NSK, FAG ma ọ bụ INA
N'ihu na azụ Nche ngere
Nke gara aga: etiti ọsọ EDM waya ịcha igwe
Osote: Nka na ụzụ oke nke Hydraulic akpacha ajị igwe 6x3200MM na E21
Hydraulic pịa breeki
ELECTROHYDRAULIC SERVO CNC PRESS Breeki
HYDRAULIC NC Pịa Mgbaji
Gantry Mkpa egweri igwe, Gantry Single-End Mkpa-egweri igwe, Gantry Ugboro abụọ Head Mkpa egweri Machine, Gantry Double-End Mkpa egweri Machine, Gantry Single Head Mkpa egweri Machine, Gantry Type Mkpa egweri igwe,